UNWTO: vonona ny hampandroso ny fizahan-tany amin'ny fizahan-tany amin'ny sehatry ny toekarena ambony ny 2018
Home » Travel Associations News » UNWTO: vonona ny hampandroso ny fizahan-tany amin'ny fizahan-tany amin'ny sehatry ny toekarena ambony ny 2018
Ny tarehimarika farany momba ny fizahan-tany eran-tany navoakan'ny World Tourism Organization (UNWTO) dia mampiseho fa ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena dia nitombo 5% isan-taona tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny taona 2018. Maneho taratra fitakiana mitohy izany ao anatin'ny toe-karena ara-toekarena ankapobeny.
Ny faritra rehetra manerantany dia nankafy fitomboana matanjaka amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ity taona ity, natosiky ny fangatahana mafy avy amin'ny tsena lehibe. Azia sy Pasifika no nitarika fitomboana (+ 7%), narahin'i Eropa sy Moyen Orient (+ 6% tsirairay avy), Afrika (+ 5%) ary Amerika (+ 3%).
Na eo aza ny fitomboana somary miadana kokoa eo anelanelan'ny volana Jolay sy Septambra, dia nanombatombana ny UNWTO fa nahatratra 1,083 tapitrisa ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena hatramin'ny septambra, 56 tapitrisa fanampiny raha oharina amin'ny vanim-potoana nitovy tamin'ny 2017.
Ny valiny 2018 hatreto dia mifanaraka amin'ny vinavinan'ny UNWTO momba ny + 4% ka hatramin'ny + 5% amin'ny taona. Ny sivy volana voalohany amin'ny taona dia mazàna amin'ny telo ampahefatry ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena isan-taona, satria ao anatin'izany ny vanim-potoana avaratry ny hemisphere avaratra amin'ny volana Jolay sy Aogositra.
Fisondrotana tsara amin'ny vola miditra amin'ny fizahantany manerana ny toerana itodiana rehetra
Miaraka amin'ny faningana vitsivitsy, ny angon-drakitra voalohany momba ny tapakila fizahan-tany iraisam-pirenena dia manamarina ny fironana tsara hita amin'ny olona tonga, miaraka amin'ny vokatra matanjaka indrindra any amin'ny toerana aziatika sy eropeana.
Anisan'ireo nahazo vola be, ny vola miditra amin'ny fizahan-tany any Angletera dia nitombo 12% na dia teo aza ny fihenan'ny fahatongavan'ireo. Any Aostralia, nitombo 11% ny tapakila raha toa kosa ka nitatitra fitomboana 8% i Frantsa ary 6% kosa i Italia, izay samy mifanaraka amin'ny fitomboan'ny olona tonga. Niakatra 3% ny tapakila fizahan-tany any Etazonia, Espana ary Alemana.
Any Azia dia nandrakitra fiakarana 21% amin'ny karama fizahantany i Shina, ary ny Macao (Shina) ary ny Japan koa dia nitarika valiny niaraka tamin'ny fitomboana 20% sy 19%.
Fandaniana fizahan-tany iraisam-pirenena
Ny angon-drakitra voalohany momba ny fandaniam-bolan'ny fizahan-tany mandritra ny sivy volana voalohany amin'ny 2018 dia taratry ny fitomboan'ny tinady avy amin'ny tsena loharano lehibe.
Ny Federasiona Rosiana (+ 15%) dia nitatitra ny fiakaran'ny vidim-piainana lehibe indrindra ary manohy manarina mafy taorian'ny fihenan'ny taona vitsivitsy. Ny Fanjakana Mitambatra dia nitatitra fitomboana 10% na dia teo aza ny fatiantoka malemy raha oharina amin'ny euro sy dolara amerikana, ary ny fandaniana fizahan-tany avy any Frantsa dia nahazo 10% taorian'ny firoboroboan'ny taona vitsivitsy.
Etazonia, tsena loharano faharoa lehibe indrindra manerantany, dia nandrakitra fiakarana 7% mifanaraka amin'ny zava-bitan'ny taona vitsivitsy raha naneho fihenam-bidy kely kosa ny tsena loharanon-karena farany China nandritra ny enim-bolana voalohan'ny taona 2018 vokatry ny Yuan malemy.